Badmaaxiin La Socotay Markab Xamuul Oo Ku Degay Xeebaha Somalia - Radio...
War Qoraal oo ay Ciiddanka Badda ee Maraykanka soo saareen ayaa lagu sheegay inay soo badbaadiyeen 15 Badlaaxiin la socotay Markab ku sii degayey meel ka baxsan Xeebaha dalkeena Soomaaliya.
Qoraalka ayaa lagu xusay in Xarunta UK ugu qaabilsan La-socodka Maraakiibta Ganacsiga ku soo wargeliyeen Ciiddanka Badda Maraykanka inay u gurmadaan Markab ay cillad farsamo ku qabsatay Gacanka Cadmeed.
Mariniska Maraykanka waxay tilmaameen inay si degdeg ah u gurmadeen Markabka cilladaysnaa ee MV Falcon Line, ka hor inta uusan Markabka si buuxda u degin ama u quusin.
Wararka Maanta : Deg Deg: DF oo mar kale dhulka la jartay Kenya, Xogta Qaraxii Muqdisho &...
Badmaaxiinta la soo badbaadiyey oo aan la sheegin dalalka ay ka soo eedaan waxaa loo fidiyey Gurmad, iyagoo la siiyey cunto, biyo iyo baaritaan Caafimaad.
Dhinaca kale, Taliska Dhexe ee Guutada 5-aad ee Ciiddanka Maraykanka ee Saldhiga ku leh dalka Baxrayn waxay sheegeen inay ku hawlan yihiin sidii ay u xiriirin lahaayeen Milkiilaha Markabka MV Falcon Line iyo Maamulayaasha kale, si loo go’aamiyo Goobta ugu wanaagsan ee ay Badmaaxiinta la soo badbaadiyey uga soo degi karaan.
Wararka Maanta : Maxaa ka soo baxay kulankii Biden iyo Erdogan? - Radio...
Markabka Xamuulka ee Falcon Line ee ku degay meel ka baxsan Xeebaha Somalia waxaa uu ka diiwaan gashan dalka Gabon, waxaana la dhisay sanadkii 1991-kii..
Related Topics:Badmaaxiinbbc somali wararka duhurnimodegayMarkabRadioradio daljir wararkasocotaySomaliawararka itoobiya ugu danbeeyayxamuulxeebaha
Waa Kuwee Magaalooyinka Ugu Nolosha Wacan Dunida?
Abiy oo sheegay in ciidamada Eritrea & Sudan laga saarayo Itoobiya -…
Ra’iisal wasaaraha Itooobiya, Abiy Ahmed, ayaa sheegay in ciidamada dalalka Sudan iyo Eritrea ay ka shaqeynayaan sidii looga saari lahaa dalkiisa.
Kal hore waxaa laga war qabey un in gudaha Itoobiya ay kusugan yihiin ciidamo ka socda Eritrea, kuwaasoo ka barbar dagaalamayey ciidamada dowladda Itoobiya.
Waxaa haatan soo shaac baxay in ciidamo kale oo ka socda dalka Sudan iney iyaguna kusugan yihiin gudaha wadanka Itoobiya.
Khilaafka soohdinta ee labadda dal ee Sudan iyo Ethiopia, ayaa cirka isku shareerey, kadib markii sidoo kale dowladda Sudan ay codsatey in ciidamada nabad ilaalinta ee Itoobiyaanka ah, ee kusugan gudaha dalkeeda lagu badalo ciidamo kale.
Wararka Maanta : Sacuudiga iyo Imaaraadka oo wada-hadallo la furaya Iiraan - Wararka Maanta:...
Waa cusub oo u billowday Turkiga iyo Mareykanka – Wararka Maanta:…
Madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa Isniintii sheegay in Turkey iyo Mareykanka ay gelayaan “waa cusub” oo xiriirkooda ah, kadib markii xiriirka xulufadan NATO uu sanadihii dhowaa u xumaaday arrimo dhowr ah.
Isaga oo ka hadlayey kulanka Golaha Wasiirada ayaa Erdogan si kastaba, waxa uu ugu baaqay Mareykanka inay xushmeeyaan xuquuqda madax-banaani ee Turkey – ayada oo ay u muuqata inuu ula jeedo go’aanka ay kusoo iibsatay gantaallada Ruushka.
Erdogan ayaa hadalkan jeediyey maalmo kadib markii uu kulankiisii ugu horreeyey ee weji-ka-weji ah la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden tan iyo markii uu xafiiska yimid. Labada nin, oo muddo isgaranayey, ayaa ku doc kulmay shir madaxeedkii NATO ee Brussels.
Wararka Maanta : Nolosha Ciidanka Somalia ee Eritrea & Wararka been abuurka ah ee ku...
“Waxaan aaminsannahay inaan xallin doonno arrimaha dhibaatada leh ee inoo dhaxeeya, ayada oo lagu saleynayo filashooyinka iyo dareenada labada dhinac,” ayuu yiri Erdogan. “Waxaan isku racanay inaysan jirin arrimo aynan ka gudbi karin, islamarkaana arrimaha aan iska kaashan karno ay ballaaran yihiin oo ay faa’iido badan yihiin.”
Erdogan ayaa wada-hadalladii uu la yeeshay Biden ku qeexay kuwa dhameystiran oo miro-dhal ah, wuxuuna sheegay in labadooda ay isku raaceen inay mar kale kulmaan.
Wararka Maanta : Ciyaaryahan Christian Eriksen oo xaalad halis ah galay -...
“Waxaan aaminsanahay inaan albaabada u furnay waa cusub oo ku saleysan niyad wanaag iyo wax dhis,” ayuu yiri madaxweynaha Turkey.
Erdogan ayaa yiri “Dalabka kaliya ee Turkey waa in la ixtiraamaa xuquuqdeeda madax-banaani ee dhaqaale, lagana taageeraa halganka ay kula jirto ururada argagixisada ah ee ku sugan gudaha iyo dibedda xuduudaheeda.”
Weerar dad lagu dilay oo ka dhacay Afrikada Dhexe – Wararka Maanta:…
Calooshood u shaqeystayaal katirsan shirkadda Wagner, ayaa lagu eedeeyey iney ku dileen toban ruux, kuna gubeen konton guryo gaaraya magaalada Haute-Kotto ee gobolka dhaca waqooyi bari ee dalka Afrikada Dhexe, sida laga soo wariyey bogga internet-ka Corbeau News.
Maamulada Gobolka Banaadir & Konya oo heshiis kala saxiixday – Radio…
Wafdi ka socday Dawladda Hoose ee Muqdisho oo uu hogaaminaayay Guddoomiye K/xigeenka howlaha guud ee Maamulka gobolka Banaadir Faarax Cabdi Diini wafdigaas oo qeyb ka ah Xoghayaha guud ee gobolka Banaadir ayaa Magaalada Konya ee dalka Turkiga kula kulmay ku-xigeenka duqa magaalada Konya Mr. Ercan Uslu, Konya waxa ay kamid tahay Magaooyinka ugu waaweyn Dalka Turkiga uguna taariikhaha fog.
Labada Maamul ee Konya iyo Muqdisho ayaa ka wada hadlay kor u qaadida iskaashiga, maareynta biyaha iyo qashinka, sidoo kale fursadaha tababarada shaqaalaha gaar ahaan farsamadda gacanta ayaa kamid ahaa waxyaabihii aadka looga dooday, waxaa xusid mudan in kulanka intii uu socday laga mahadceliiyay mudnaanta Gaarka ah ee Madaxweyne Ordegan uu siiyay Guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan horumarinta Wadnaha iyo hooyada umadda Soomaaliyeed ahna Caasimadda Dalka ee Muqdisho, labada Dawlad hoose ayaa intaasi kadib isku raacay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo arimaha soo socda.
1. Xoojinta xiriirka iyo iskaashiga cusub labada magaalo.
2. In Maareynta qashinta laga taageero Dawladda Hoose ee Muqdisho maadaama Maamulka Konya ay khinrad buuxda u leeyihiin hawlaha dhinacaas la xiriira, sidoo kale waxaa Muqdisho laga taageeri doonaa khubarro farsamo oo tabanaro iyo hagitaan siin doono hawl wadeenadda nadaafadda Dawladda hoose ee Muqdisho.
3. Waxaa si wadajir ah ay labada Dawlad Hoose isugu waafaqeen in la bilaabo diyaarinta mataaneynta Muqdisho iyo Konya si labada dhinac ay iskaashi iyo wada shaqeyn buuxdo u dhex marto.
4. In si deg deg ah loo bilaabo booqasho labada maamul ay is-weydaarsanayaa taaso labada Maamul ku kala tagi doonaan Konya iyo Muqdisho.
5. In Machadka tababaradda Konya uu gacan ka siin doono Maamulka Dawladda Hoose ee Muqdisho dhinaca tababaradda shaqaalaha isla markaana ay si toos ah u wada xiriiri doonaan hawl-wadeenada labada dhinac ee Muqdisho iyo Konya.
Muwaadiniinta Soomaaliya ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku safra warqadaha aqoonsiga Soomaaliya ayaa sheegaya inay dhibaato ku qabaan inay ka baxaan dalka Kenya oo ay muddo bilooyin ah ku xayiranyihiin, kaddib xiritaankii Safaaradda Soomaaliya.
Wararka Maanta : Weerar lagu dilay Koox Miino baarayaal ah - Wararka Maanta: Somali News...
Warbixin kasoo baxday Qaramada Midoobay ayaa waxaa lagu sheegay inay aad u kordheen xadgudubyo laga argagaxo oo lagula kaco Carruurta ku nool wadamo ay kamid tahay Soomaaliya.
Warbixintan oo sanadkiiba mar kasoo baxda Qaramada Midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in ugu yaraan 19,379 carruur ah ay dhibanayaal u noqdeen xadgudubyo waaweyn oo isugu jira askarayn iyo kufsi xadhaaf ah.
Dalalka ugu badan ee tacadiyada ka dhanka ah Carruurta ay ka dhaceen ayaa waxaa Warbixinta ku sheegtay in laga diiwaan galiyay wadamada Afghanistan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo (DRC), Soomaaliya, Yemen & Suuriya.
“Iska horimaadyada hubeysan iyo tixgalin la’aanta sharciga caalamiga ah ee bini’aadamnimada iyo sharciga caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa saameyn ba’an ku yeeshay ilaalinta carruurta, ”ayaa lagu yiri warbixinta.
In ka badan 8,400 oo carruur ah ayaa lagu diley ama lagu dhaawacay dagaallada socda waddamadan. Ku dhowaad 7,000 oo kale ayaa loo qorey askarayn dalalka DRC, Soomaaliya, Suuriya, iyo Myanmar ayaa sidoo kale lagu sheegay Warbixinta QM.
Warbixintan kasoo baxday Qaramada Midoobay ayaa waxaa ay kusoo aaay xilli labadii sano ee la soo dhaafay meelo badan oo kamid ah Soomaaliya laga diiwaangeliyay kiisas la xiriira kufsi iyo dil loo geystay Carruur farabadan.
Wararka Maanta : Awooda Militeriga Kenya, Isbar-bardhiga Somaliya |Siraha Militeriga|